Ọbụna anyanwụ ga-anwụ otu ụbọchị - Eckhart Tolle (Audio) - AFRIKHEPRI
Ọbụna anyanwụ ga-anwụ n'otu ụbọchị - Eckhart Tolle (Audio)
Lee mmadụ abụọ na-agba ụgwọ (2014)
monday, Julaị 13, 2020
Lhen Eckhart Tolle kwetara n’ajụjụ ọnụ a mere na Septemba 11, 2001, ọ gaghị amatacha ụdị akụkọ ihe mere eme nke ụbọchị a ma ọ bụ nhụjuanya niile ga-esite na ya. Dịka ihe ndị ahụ mere ozugbo, ọ zaghachiri nwayọ ma nyere anyị aka ịghọta nke ọma egwu nke ga-akara ụbọchị a ruo mgbe ebighi ebi.
Ọbụna anyanwụ ga-ede otu ụbọchị akụkọ ihe mere eme nke September 11 na Eckhart Tolle na amamihe nkasi obi ọ gosipụtara n'ụbọchị ahụ.
Anyị na-ebi na ọgbọ, ọ na-ekwu, ebe anyị kọwara onwe anyị site n'aka ndị iro anyị na ebe sayensị na teknụzụ na-arụ ọrụ nke mmadụ. Ma na, obuna n ’mbibi odachi, ihe iriba ama na-eme mgbe anyi kwenyere ibi na oge ugbu a. Ọ na-akuzi na nnukwu oghere a nwere ike ibute enweghị ihe na-erughị mmalite nke mgbanwe na nghọta mmadụ ma nwee ike ịgbanwe ụwa anyị na onye ọ bụla bi na ya.
Maka oge izizi na egwu a na-ege ntị, Eckhart Tolle na-ekwukwa okwu banyere edemede ya na ihe ọ chọpụtara dịka nzọụkwụ ọzọ na mbido nke ọgụgụ mmadụ. Ọhụụ ọ na-enye iji kwụsị nhụjuanya na ọgbụgba aka ya nke ịma ọhụụ na usoro nke ime ka a mata na ọnọdụ Eckhart Tolle dị n'etiti ndị isi mmụọ ime mmụọ kachasị mkpa ma dị ugbu a.
Ọbụna Anyanwụ Ga-anwụ Otu :bọchị: Nchịkọta Ihe Mmụta Ime mmụọ Ike nke Oge A
17,30€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 17,30 €
Zụta € 17,30
ka nke ọnwa Julaị 12, 2020 1:53
Publication Ụbọchị 2007-09-25T00:00:00Z
Ibepu nke Ozi Nzuzo - HP Blavastky (Audio)
Oziọma Thomas (Audio)
Akụkọ banyere ndị Fulani: mmalite, omenala, nkwenkwe na ọdịnala
Okwu nke Winnie Mandela kwuru
Gee egwu egwu egwu
Afrikhepri Foundation sur Whitney: Ikike diri m - akwụkwọ edemede (2018): "Whitney, onye ukwe buru ibu… Udo diri nkpuru obi ya!" Jul 12, 16:07
Afrikhepri Foundation sur Ndị na - ewu ụlọ ochie ụwa - Akwụkwọ edemede (2019): "Anyị bụ n'ezie mmepeanya izizi mbụ n'ụwa?" Jul 12, 15:55
Afrikhepri Foundation sur Nlekọta ọgwụgwọ si Sahara: "A na-ejikarị mmiri ara ehi mee ncha, mana enwerekwa ude, nlekọta ntutu, nchebe anyanwụ" Jul 11, 19:55